Gollaha Wakiilada Somaliland Oo Ansixiyay Miisaaniyadii Ugu Badnayd Ee Loo Gudbiyo | Araweelo News Network (Archive) -
Gollaha Wakiilada Somaliland Oo Ansixiyay Miisaaniyadii Ugu Badnayd Ee Loo Gudbiyo
Hargeysa(ANN)Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay odoroska Miisaaniyad sannadeedka qaranka ee xukuumadda dhexe usoo gudbisay dhowaan, taas oo dhan 527,720.451,857 sl sh, isla markaana ka baddan 70% tii sannadkii hore ee 2010.waxayna
u dhigantaa Boqol Milyan oo Dollar.
Fadhigii Golaha Wakiilada ee maanta oo uu gudoominayay Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland Md. C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi (C/Raxmaan Cirro) waxa madasha fadhiyay 57 Mudane waxa ogolaaday miisaaniyadan 50 Xildhibaan, waxa ka aamusay 6 Mudane, Guddoomiyuhu muu codayn may jirin cid diiday iyo cid ka aamustay toona.
Miisaaniyadani waa tii ugu badnayd ee Somaliland samaysto labaatankii sanadood ee ay ahayd qaranka madaxa banaan, waxaana ku jira Mushahar kordhin 100% ah oo loo sameeyay ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawlada.
Golaha Wakiilada Somaliland ayaa labadii todobaad ee la soo dhaafay miisaaniyada ka yeeshay dood ay ku falan qeeyeen. Waxaana miisaaniyada ay meel mariyeen ku lifaaqeen qoraal ay wasaaradda Maaliyada kaga dalbadeen inay ku darto miisaaniyadan kharashkii lagu qaban lahaa doorashada Goleyaasha deegaanka oo muddo dhaafay oo lagu wado inay ka qabsoonto dalka sannadkan gudihiisa.